ᐈ Ahoana ny fomba hamoronana lisitra M3U IPTV amin'ny 【2022】 - EASY
M3U Espaina lisitra
Lisitra IPTV latina
Lisitra M3U hafa
Lisitra ao amin'ny Plex
Jereo ny lisitry ny M3U ao amin'ny VLC
Jereo ny lisitry ny M3U amin'ny Roku
Ampidino ny GB WhatsApp Delta APK
BlackMart APK farany Version
Ampidino ny Deezer Premium MOD
Dika farany an'ny MX Player Pro
Ampidino ny Tinder Gold Mod APK
Lisitry ny M3U IPTV tsara indrindra 2022
IPTV dia teknôlôjia izay nitombo be tao anatin'ny folo taona farany, ary tao anatin'izany dia nivoatra be izany. Amin'izao fotoana izao dia saika ny sehatra fialamboly mikoriana rehetra no mampiasa an'ity protocol ity hamoronana lisitra M3U.
Raha mbola tsy fantatrao ny momba ny lisitry ny IPTV sy M3U dia ho anao ity lahatsoratra ity. Ho hitanao ny zava-drehetra momba an'ity protocol ity mba hankafizanao ireo safidy atolony antsika amin'ny fialamboly sy ny fomba hamoronana ny lisitry ny M3U antsika mba hanampiana azy ireo amin'ny mpizara IPTV.
Inona no hianaranao eto?
Inona ny lisitry ny M3U?
Inona no teknolojia ampiasain'ny M3U miasa?
Inona no votoaty azo ankafizina amin'ny lisitry ny M3U?
Ahoana ary aiza no hisintonana lisitra M3U?
Inona ny IPTV?
Inona avy ireo lisitry ny fantsona IPTV?
Ny fahasamihafana eo amin'ny IPTV sy ny streaming
Ahoana ny fomba hamoronana lisitra M3U IPTV miaraka amin'ny programa
Ahoana ny fomba fanaovana lisitra M3U IPTV miaraka amin'ny notepad sy fantsona fanovana
Inona no tafiditra amin'ny lisitry ny IPTV M3U Mexico Online?
Lisitry ny IPTV - M3U Mexico
M3U lisitry ny fantsona Meksikana
Lisitry ny sarimihetsika M3U avy any Mexico
Ny lisitra M3U nohavaozina tsara indrindra sy maimaim-poana
Lisitra IPTV - M3U an'i Espaina sy fanatanjahantena
Lisitra IPTV - Latina sy M3U manerantany
Lisitra IPTV - M3U amin'ny sarimihetsika sy andiany
Ahoana ny fametrahana lisitra M3U ao amin'ny Qviart Combo V2
Ahoana ny fametrahana lisitra M3U amin'ny SS IPTV
Nahoana no mamorona lisitra ao amin'ny SS IPTV?
Lisitra iptv latinina
WhatsApp Delta farany
Ny endrika M3U dia fanitarana rakitra karazana fisaka, izay azo sokafana sy ovaina amin'ny tonian-dahatsoratra rehetra, ohatra, ny Windows notepad. M3U no fanafohezana ny hoe "URL version 3.0 MPEG".
¡Ity karazana rakitra ity dia ampiasaina hamoronana na hitehirizana playlists na Playlists media.
Tany am-piandohana dia Winamp ihany no nanohana azy, fa amin'izao fotoana izao dia azon'ny mpilalao marobe izy ios, izay nahatonga azy ho fenitra raha ny amin'ny famoronana playlists.
Ny zavatra ataon'ny lisitra M3U dia mamaritra ny toerana misy ny rakitra multimedia rehetra tiantsika hilalao. Ho an'izany dia misy endrika fanoratana manokana izay tsy maintsy ampiasaintsika rehefa te-hamorona ny lisitray manokana. Hianarantsika izany eto ambany.
Ny lisitry ny M3U dia voaforon'ny andiana adiresy tranonkala izay toerana lavitra ny votoaty hankafizana, azonao atao ny mampiditra programa premium na fantsona feno avy amin'ny toerana rehetra manerana izao tontolo izao, na eo an-toerana, na nasionaly na iraisam-pirenena.
Mba hiasana lisitra M3U dia tsy maintsy ampidirina amin'ny mpilalao haino aman-jery manohana io karazana rakitra io.. Amin'izao fotoana izao, saika ny fampiharana na programa natao hilalao votoaty multimedia dia afaka milalao ity format rakitra ity tsy misy fahasarotana.
Ireo karazana lisitra ireo dia manana tombony fa havaozina tsy tapaka avy lavitra.Amin'izany fomba izany dia tsy hanahy momba ny fahataperan'ny URL izay nampiantranoana ny angon-drakitra amin'ny atiny multimedia izay tiantsika indrindra isika.
Lisitry ny M3U tsara indrindra ho an'ny IPTV any Espaina 2022
Lisitry ny M3U Latino ambony indrindra 2022
Ahoana ny famoronana lisitra M3U ho an'i Kodi
Ahoana ny fijerena ny lisitry ny M3U amin'ny Roku
Ahoana ny fomba hanampiana lisitra M3U ao amin'ny Plex
Ahoana ny fomba hanampiana lisitra M3U ao amin'ny OTTPlayer
Ahoana ny fijerena ny lisitry ny M3U ao amin'ny VLC
Ny lisitry ny M3U dia mety ahitana karazana votoaty azonao eritreretina. Afaka mahita lisitra manokana amin'ny fantsona samihafa na miaraka amin'ny fantsona manokana amin'ny faritra na firenena.
Toy izany koa, afaka mahita na mitahiry sarimihetsika, andian-tantara ary fanadihadiana amin'ny fitenin-drazanao na amin'ny fiteny hafa ianaoNa ny dikanteny aza dia azo tehirizina ho an'ny tsirairay amin'ireo atiny ireo.
Ny rakitra eo an-toerana dia azo tehirizina amin'ny alalan'ny playlist M3U, mba hahafahanao mandamina ny filaharan'ny kilalao, ary avy eo mankafy ny playlists amin'ny fitaovana na mpilalao media rehetra.
Miaraka amin'ny lisitry ny M3U dia afaka mankafy fialamboly mivantana amin'ny fitaovana rehetra na amin'ny alàlan'ny mpilalao votoaty multimedia isika. Manaraka izany dia hazavainay hoe aiza sy ahoana no ahafahanao misintona lisitra M3U.
IPTV dia mitanisa an'i Espaina
Raha te haka lisitra M3U ianao dia tsy maintsy mandeha aloha Ity rohy ity, ary avy eo dia miditra amin'ny anaranao sy ny tenimiafinao ianao. Raha tsy manana izany ianao dia afaka mamorona azy mora foana amin'ny fanarahana ny bokotra "Mihira" Na azonao atao ny mampiasa ny sehatra Google, Facebook ary Twitter hanaovana izany haingana kokoa.
Rehefa tafiditra ao amin'ny pejy isika dia mandehana any amin'ny bara fitadiavana ary manoratra ny anaran'ny lisitra tiantsika hokarohina. Tena zava-dehibe ny fametrahanao ny prefix foana "IPTV" o "M3U" mba hitondra antsika mivantana amin'ireo karazana lisitra ireo ny milina fikarohana.
Raha te hahita lisitra nohavaozina dia mankanesa any amin'ilay efajoro milaza "Mifandray" ary safidio ny safidy "Daty" ary avy eo dia hiseho ny lisitra farany indrindra, ary mety miasa manontolo izy ireo.
Farany dia misafidy ianao amin'ny fipihana ny lisitra tianao, ary tohizo ny kopia ny adiresy hita ao amin'ny bara adiresy. Ity ny URL ho adikao amin'ny fampiharana IPTV-nao na amin'ny mpilalao votoaty multimedia izay ampiasainao.
Raha te-hahafantatra momba ny programa sy mpilalao tsara indrindra amin'ny lisitry ny IPTV na M3U azonao apetraka ianao dia jereo ny fidiranay hafa mba hahafahanao misafidy izay mifanaraka amin'ny filanao.
Ankehitriny, ny fampianarana izay vao avy nofaritanay dia miasa ho an'ny iray amin'ireo pejy malaza indrindra hitadiavana ny lisitry ny M3U, saingy tsy io irery no tranonkala ao amin'ny sokajy misy azy. Ity lisitra manaraka ity dia mamaritra tranonkala hafa hahitanao ny lisitry ny M3U tsara indrindra.
stratustv: Izy io dia mampiseho anao andiana lisitra amin'ny endrika M3U izay azonao ampiana sy lalaovina mora foana. Ny lisitra dia nalamina araka ny firenena sy amin'ny fiteny samihafa. Ny lisitra tsirairay dia manana fantsona votoaty isan-karazany ho an'ny tsiro sy taona rehetra.
IPTVSRC: Amin'ity pejy ity dia afaka mahita lisitra nohavaozina isan'andro ianao. Manolotra lisitra ao amin'ny M3U misy karazana votoaty isan-karazany amin'ny fantsona, andiany ary sarimihetsika, ankoatry ny fiteny maro sy ho an'ny taona rehetra. Ho sanda fanampiny amin'ny lisitra tsirairay dia afaka mahita fantsona amin'ny HD ianao.
Mety aminao izany: Raha ny marina dia bilaogy iray miresaka lohahevitra isan-karazany izy io. Na izany aza, amin'ny manaraka rohy Azonao atao ny mandeha mivantana amin'ny fidirana iray izay mampiseho anao andiana lisitra M3U nohavaozina ary azonao atao ny mahita ny karazana atiny, satria voabaiko izy ireo.
APK rehetra: Ity bilaogy ity dia manana fidirana miaraka amin'ny andiana lisitra nohavaozina sy maimaim-poana tanteraka. Mba hahazoana azy ireo tsindrio eto.
Fluxus.TV: Ao amin'ity tranokala ity ianao dia afaka mahita lisitra tsy manam-petra amin'ny endrika M3U efa vonona havoaka tsy misy hadisoana satria havaozina foana izy ireo. Ny votoatiny dia tena samihafa ary afaka mahita andian-dahatsoratra, sarimihetsika ary fantsona ho an'ny sokajin-taona rehetra sy amin'ny fiteny samihafa ianao.
IPTV dia mijoro ho an'ny Internet Protocol Television, izay Izy io dia teknolojia mampiasa ny protocol IP sy ny Internet mba handefasana votoaty multimedia amin'ny alàlan'ny Streaming. Matetika izy io no ampiasaina handefasana fantsona, andian-tantara ary sarimihetsika amin'ny tamba-jotra midadasika.
Ny fampiasana tambajotram-pifandraisana malalaka dia manafoana ny fampiasana tariby sy antenne manelingelina. Ny IPTV dia lisitry ny fantsona alefa amin'ny Internet ary azonay idirana amin'ny fitaovana rehetra, satria ireo lisitra ireo dia afaka mampiditra azy ireo amin'ny fampiharana rehetra amin'ny famokarana votoaty multimedia.
Misy karazana lisitra izay be mpampiasa indrindra amin'ny sehatra IPTV, izy ireo dia noforonina miaraka amin'ny fanitarana M3U. Andeha hojerentsika ny momba azy ireo sy ny fomba ahafahantsika mamorona lisitra manokana amin'ny alàlan'ny IPTV.
Ny IPTV dia malaza be noho ny tsy mila manakarama mpandraharaha hankafizanao ny votoatin'ny streaming, izany dia manafaka anao amin'ny fandaniana fanampiny izay tena mahasoa amin'ny fitahirizana ara-toekarena. Raha tsy izany dia afaka mankafy IPTV ianao amin'ny alàlan'ny lisitra IPTV na M3U.
Ny lisitry ny IPTV dia ampiasaina hitahirizana ny adiresy na URL idirana amin'ny tranonkala ny fantsona samihafa miasa amin'ny IPTV. mampiasa adiresy IP lavitra.
Ny lisitra IPTV izay matetika hitantsika amin'ny Internet dia tonga amin'ny endrika M3U, izay endrika somary manerantany, ary mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny mpilalao votoaty multimedia, na izany aza, afaka mahita lisitra IPTV ianao amin'ny endrika M3U8 na W3U.
Na ny serivisy sy ny IPTV ary ny streaming dia manana fitoviana be dia be momba ny toetra sasany, na izany aza, misy ny fahasamihafana sasany izay manome lanja tokana ho an'ny tsirairay amin'ireo serivisy fialamboly ireo.
Ny fahasamihafana manan-danja indrindra dia ny lisitry ny IPTV dia mampiasa ny tambajotra tsy miankina, izay manome vahana ny fivezivezena angon-drakitra amin'ny fomba haingana kokoa sy azo antoka kokoa.. Mandritra izany fotoana izany, ny serivisy streaming dia tonga amin'ny tambajotra misokatra sy tsy voatanisa toy ny mailaka sy ny fitetezana tranonkala, izany hoe tambajotra tsy natokana.
Raha fintinina, Ny serivisy fahitalavitra mivantana dia mitaky fepetra fifandraisana ambony kokoa, raha toa ka tsy mitaky fepetra be dia be ny lisitry ny IPTV, noho izany dia afaka mankafy ny atiny amin'ny hafainganam-pandeha tsy dia avo loatra ianao.
Raha te hanao lisitra M3U ianao dia tsy maintsy fantatrao aloha fa misy rafitra baiko tokana tsy maintsy tadidinao mba hamoronana lisitra M3U IPTV miasa tsara.
Ity rafitra ity dia ny manaraka:
#EXTINF: (faharetana), (toetra), (lohatenin'ny fantsona)
Andeha hojerentsika ny dikan'ny protocol tsirairay:
# EXTM3U: Tsy maintsy atao eo am-piandohan'ny lahatsoratra ihany ny fametrahana azy. Ity baiko ity dia milaza amin'ny mpilalao fa amin'ny endrika M3U miitatra ny lisitra ary izany dia noho izy manana toetra fanampiny sasany izay tsy tratra ao anaty lisitra M3U fototra.
#EXTINF: Io no baiko manondro hoe taiza no nanombohan'ny metadata fanampiny izay nanombohan'ny Streaming tsirairay ao amin'ny lisitra. Ity baiko ity dia tsy maintsy ampiasaina isaky ny te-hanampy fantsona isika, izany hoe raha mitanisa fantsona folo isika dia tsy maintsy miseho impolo isaky ny fantsona ny baiko.
Izy io koa dia miaraka amin'ny toetra sasany amin'ny multimedia izay halefantsika. Ao anatin'izany ny: ny faharetany, ny toetra ary ny lohatenin'ny fantsona.
Ny tsirairay amin'izy ireo dia tsy maintsy misaraka amin'ny toerana banga. Andeha hojerentsika hoe inona no ampiasaina amin'ireo toetra ireo.
Ny faharetana: mifanitsy amin'ny fotoana refesina ao anatin'ny segondra amin'ny rakitra multimedia resahina. tHo an'ny lisitry ny IPTV dia masontsivana roa ihany no fantatra, ny sanda aotra (0) ary ny sanda latsaky ny iray (-1).
Amin'ny ankapobeny dia tsy maintsy mampiasa ny sanda -1 isika mba hanondroana amin'ny mpilalao fa tsy raikitra na tsy azo faritana ny faharetan'ny streaming.
Ny toetra: Fampahalalana fanampiny tiantsika haseho ao anatin'ny mpilalao izany. Ireo angon-drakitra ireo dia mety ho torolàlana fandaharana, filaharana, logo fantsona, fiteny ary toetra hafa.tsy voatery anefa izany.
Ny lohatenin'ny fantsona: manondro ny anarana izay hiseho eo amin'ny mpilalao. Tsy maintsy ialohavan'ny faingo (,) ary tsy misy toerana aorian'ny faingo.
URL: Eto isika dia hanondro ny URL na adiresy tranonkala izay hampiantranoana ny fantsona, andian-tantara na sarimihetsika tiantsika ampidirina amin'ny lisitra.
Toy izany koa, ny adiresy na ny làlan'ny fampiantranoana ny rakitra multimedia eo an-toerana dia voasoratra eto, izany hoe ilay voatahiry ao amin'ny ordinaterantsika.
Ankehitriny fantatrao izany, afaka manomboka mamorona playlists manokana amin'ny endrika .m3u isika, ary ny zavatra voalohany hataontsika dia manokatra tonian-dahatsoratra araka ny rafitra fiasan-tsika.
Ny zavatra manaraka dia ny manomboka manampy ny fampahalalana momba ny rohy izay tiantsika haverina manaraka ny baiko protocol izay efa nambarantsika teo aloha. Mba hahatsiarovana azy ireo:
Tsarovy fa ny didy voalohany; izany hoe; Ny # EXTM3U dia tokony ampiana indray mandeha ihany amin'ny andalana voalohany, tsy tokony haverina manomboka eto. Andeha hojerentsika ohatra vitsivitsy amin'ireto baiko ireto:
#EXTINF:-1, Sarimihetsika Santionany (2017)
Farany, rehefa nampidirintsika ny adiresin'ireo fantsona, andian-tantara ary sarimihetsika rehetra tiantsika hojerena, dia tsy maintsy miroso amin'ny famonjena izany isika.
Ao amin'ny tabilao fichier, tokony handeha amin'ny safidy "Save as". Rehefa miseho ity varavarankely manaraka ity dia tsy maintsy mitady ny toerana hitahirizanao ny rakitra ianao ary ao amin'ny fizarana anarana dia tsy maintsy apetrakao ny anarana homenao ny rakitra. ary tsy maintsy ampio ny fanitarana .m3u amin'ny faran'ny anarana.
Raha tsy manampy an'io fampahalalana io ianao, dia tsy ho azon'ny rindranasa na programa tianao hamerenana ireo lisitra ireo ilay lisitra.
Amin'izao fotoana izao dia efa noforonina ny lisitry ny tenanao manokana, tsy maintsy mandeha mametraka izany ao amin'ny fampiharana na programa tianao ianao ary mankafy.
Raha mbola tsy hainao ny manampy ity lisitra ity amin'ireo programa playback ireo dia azonao atao ny mitsidika ny fampianaranay izay hanazavantsika tsikelikely ny fomba fampiakarana lisitra M3U.
Efa fantatsika fa ny lisitry ny M3U dia misy fitaovana isan-karazany. Raha ny lisitry ny IPTV Mexico, dia afaka mahita ny fanatanjahantena eo an-toerana sy iraisam-pirenena, vaovao, sarimihetsika ary fantsona fanadihadiana ianao.
Ny sasany amin'ireo fantsona dia mety ho:
Ao amin'ny lisitra IPTV na M3U dia mahita fantsona avy amin'ny firenena samihafa sy fiteny samihafa ianao ary mety tsy izany no tadiavinao.
Noho izany, raha any Meksika ianao ka te-hahita lisitr'ireo fantsona sy sarimihetsika Meksikana, dia avelanay lisitra tsara izay hanampy anao hahazo ny fialamboly tsara indrindra:
Ankehitriny rehefa nametraka programa manohana ny rakitra M3U izahay, dia tsy afaka mifantoka afa-tsy amin'ny fitadiavana ny lisitry ny M3U tsara indrindra izay manara-maso sy maimaim-poana 100%.
Na dia tsy mora aza indraindray ny mahita ireo lisitra ireo, izahay Nanao fikarohana ho anao izahay ary avelanay ho anao ny lisitry ny M3U tsara indrindra izay havaozina lavitra ary maimaim-poana tanteraka ny fidirana..
Ny Qviart Combo V2 dia zanabolana nomerika sy TDTHD decoder na mpandray, izay manana fanohanana DVB-T2 sy DVB-S2 mahazatra. Izy io dia miorim-paka ary manamora ny firaketana amin'ny alàlan'ny seranana USB roa, manana Media Player manana kalitao sary miavaka ihany koa izy noho ny famaritana 1080p FullHD.
Raha te hankafy fialamboly dia tsy maintsy mametraka ny fantsona tianao indrindra ianao ary ireto misy safidy roa, araka ny lisitra sy ny fantsona isaky ny fantsona:
Voalohany indrindra, manomana lisitra backup na backup ny fantsona, avy eo:
Ampidiro ny pendrive miaraka amin'ireo fantsona ary safidio ny safidy USB.
Safidio ny bokotra mavo milaza hoe “Ampidiro ny angona".
Ny fitaovana dia hanontany anao ny fampifanarahana amin'ny endriky ny fanontaniana hoe "¿fampitana?", Iza no mamaly an'io"SI".
Fotoana ho "Download ny lisitra", mamaha ny rakitra.
Rehefa mampiditra ny pendrive ao amin'ny decoder ianao dia mandeha amin'ny fantsona 1 mankany Menu> Fanitarana> USB Menu.
Mifidy ny lisitra ianao.
Hangataka anao hanamarina izany "Hanavao?"
Valio indray "SI".
Rehefa afaka segondra vitsy dia ho afaka hivoaka ny sakafo ianao, ary vonoy ny fitaovana avy amin'ny fanaraha-maso lavitra ary avy eo ara-batana avy amin'ny bokotra off.
Rehefa manomboka izany indray ianao aorian'ny iray minitra, ny lisitry ny M3U dia tokony ho feno ao amin'ny Qviart Combo V2 anao.
naoty: Raha toa ka tsy nohavaozina izany dia tokony hojerenao ny fandrindrana tambajotra. Ary raha manana fantsona tavela ianao dia azonao atao ny manaraka ireto dingana manaraka ireto.
Ny dingana voalohany dia ny miditra amin'ny safidy IPTV.
Dia ho hitanao ity efijery manaraka ity:
Avy eo safidio ny safidy mena izay milaza hoe "hametraka” Hanampy fantsona vaovao.
Ny tenimiafina default dia 0000, midira ary tohizo:
Afaka miditra amin'ny fantsona amin'ny fomba maro ianao:
URL sary: Amin'ny fisafidianana ny zana-tsipìka havanana amin'ny baiko, azonao atao ny miditra ny URL misy sary iray izay ho kisary fantsona.
URL video: Safidy iray hafa ho hitanao rehefa manindry ny zana-tsipìka havanana ianao dia ny fampidirana ny URL an'ny fantsona voafantina ao amin'ny IPTV.
Saina olon-dehibe: ho an'ny fantsona olon-dehibe.
Rehefa avy niditra tao amin'ny URL ny fantsona ary nisafidy OK, manomboka mampakatra ny fantsona.
Ny fantsona tsirairay dia mitondra entana ao anatin'ny 45 segondra eo ho eo.
Amin'ny faran'ny fidirana tsirairay, ny pejy fandraisana dia hampiseho taila. Eo no ahitanao ny vokatry ny fampidirana sary avy amin'ny fantsona. Raha tsy nampidirintsika tamin'ny sary izany dia ho toy izao:
6. Raha te hampiditra sary, safidio fotsiny ny bokotra manga milaza hoe “Ovay".
Amin'ireo dingana tsotra ireo dia azonao atao ny manampy ny fantsona tianao amin'ny Qviart Combo V2.
Manoro hevitra anao izahay hanaraka ny dingana amin'ny fametrahana ny Lisitry ny M3U ao amin'ny SS IPTV:
Mandehana any amin'ny application SSIPTV amin'ny Smart TV-nao.
Hisokatra ity boaty fifampiresahana manaraka ity:
3. Fidio ny Fikirana, araka ny asehon'ny zana-tsipìka:
Ity efijery manaraka ity dia hiseho:
Avy eo dia tsy maintsy mamorona kaody fifandraisana ianao. Safidio ny safidy Makà kaody (Zana-tsipìka 1), ary hisy kaody alfanumerik ho noforonina izay tsy maintsy adikao (Arrow 2).
Mankanesa any amin'ny pejy ofisialin'ny SSIPTV avy amin'ny navigateur amin'ny fipihana eto.
Ho hitanao ity efijery manaraka ity
Apetraho eo amin'ny toerana misy azy ny kaody Ampidiro ny kaody fifandraisana (Arrow 1 amin'ny sary manaraka).
Select MANAMPY DEVISY (Zana-tsipìka 2).
Ity pejy ity dia hisokatra amin'ny toerana tsy maintsy ahitanao ny toerana misy azy Playlist ivelany ary safidio ao ADD ITEM.
Hisokatra ny varavarankely mipoitra
Amin'izany dia tsy maintsy ampidirinao ireto data manaraka ireto:
Anarana aseho: Anarana lisitra. Ohatra: Ny lisitry ny M3U
Source: Ny URL an'ny lisitra M3U tianao hampidirina.
Hikatona ny varavarankelin'ny pop-up ary hijanona eo amin'ny toerana tsy maintsy hamonjena ny angon-drakitra miditra ny efijery, mifidy ny safidy
Efa ao amin'ny fampiharana ny SmartTV ianao dia tsy maintsy manavao ny vaovao, mifidy ny kisary ny recharge eo an-tampony havanana amin'ny sakafo:
Manomboka izao dia afaka mijery ny fantsona rehetra avy amin'ny rohinao manokana ianao.
Vita dia nahomby ny lisitry ny M3U anao amin'ny SS IPTV.
Mba hahafahana mametraka lamina manokana amin'ny famokarana, ary manafoana ireo rakitra tsy ilaina, na manampy ireo vaovao. Amin'izay dia mamonjy ny olana amin'ny fampidirana azy tsirairay ianao.
Ny lisitra tsirairay dia tsy maintsy alaina amin'ny fitaovana na farafaharatsiny ho voatahiry ao amin'ny "My account", raha toa ka mampiasa ForkPlayer amin'ny Smart-TV.
Ho fanamarihana manan-danja tokony homarihina, raha te hihaino mozika ianao, ary manana fifandraisana Internet tsara, dia tsy mila mitahiry ny playlist. Ampy fotsiny ny hampidirana azy amin'ny mpilalao, fitaovana finday na PC.
Aza adino ny mitsidika:
Ampidino ny kinova farany an'ny WhatsApp Plus (AntiBan) APK
Ampidino ny Videoder Premium Apk 2022
Ampidino ny kinova farany an'ny YouTube Music Premium APK
Lisitra IPTV maimaim-poana ho an'ny olon-dehibe (havaozina 2022)
Lisitry ny mpilalao Ticky
Ahoana ny fijerena ny lisitry ny IPTV ao amin'ny Kodi?
© 2022 MtresU • Namboarina tamin'ny GeneratePress